Airbus waxay heshay heshiiskii ugu horreeyay ee Waqooyiga Ameerika ee Duullimaadka Saacadda oo ay la gasho shirkadda JetBlue Airways
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Airbus waxay heshay heshiiskii ugu horreeyay ee Waqooyiga Ameerika ee Duullimaadka Saacadda oo ay la gasho shirkadda JetBlue Airways
Qandaraaska adeegga ee saacadda-saacadlaha ah waxaa ka mid ah adeegyo maadi ah oo leh maareynta keydka qaybaha, iyo sidoo kale marin u helka qaybta Airbus, adeegyada injineernimada iyo dayactirka.
JetBlue waxay ku heleysaa adeegyo dayactir qaybaha Airbus-ka ah muddo dheer diyaaradeeda 70 A220 iyadoo la dalbanayo
A220 wuxuu hawlgal ka bilaabay JetBlue bishii Abriil 2021
Macaamiisha A220 ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijka FHS ee dayactirka ee Airbus
Airbus waxay saxiixday qandaraaskeedii ugu horreeyay ee Duulimaadyada Saacadaha (FHS) macaamiisha Waqooyiga Ameerika. Diyaaradda fadhigeedu yahay Mareykanka ee JetBlue waxay ku heleysaa adeegyada dayactirka qaybaha Airbus muddada-dheer diyaaradeeda 70 A220 iyadoo la raacayo amar. Diyaaradii A220 waxay kubilaawday howlo JetBlue bishii Abriil 2021.
Qandaraaska adeegga ee saacadda-saacadlaha ah waxaa ka mid ah adeegyo agab ah oo leh maareynta keydka qaybaha, iyo sidoo kale marin u helka Airbus'barkadda qaybo, adeegyada injineernimada iyo dayactirka.
“Dhammaan barnaamijyada diyaaradaha ee Airbus, macaamiisha A220 waxay ka faa’iideysanayaan barnaamijka FHS ee dayactirka lagu yaqaan ee Airbus. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno JetBlue oo ah macaamiisheena ugu horeeya ee FHS ee Waqooyiga Ameerika oo aan awood u yeelan karno inaan sii kordhino helitaankeeda diyaaradeed ee A220 ee taageerada dib u soo celinta taraafikada ”, ayuu yiri Dominik Wacht, Madaxa Adeegyada Macaamiisha ee Airbus, Waqooyiga Ameerika.
"Iyadoo si aad ah uga hooseysa kharashka hawlgalka tooska ah ee diyaaradaha kale ee raacayaga shidaalka iyo keydka shidaalka, A220 sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa dib-u-dejinta qiimaha dayactirka JetBlue si wanaagsan illaa tobanka sano," ayuu yiri Bill Cade, Madaxweyne Ku-Xigeenka Hawlaha Farsamada, JetBlue. “Xalka Airbus 'FHS wuxuu gacan ka geysanayaa taageerida yoolalkayaga maaliyadeed ee muddada-dheer maaddaama ay la xiriiraan dayactirka waxayna taageertaa awooddeena inaan ku siino qiimo jaban iyo adeeg abaalmarin ah macaamiil badan oo JetBlue ah
JetBlue wuxuu noqonayaa kii saddexaad ee shirkadda duulimaadka A220 ee adeegsada adeegga Fbus ee Airbus '. In ka badan 150 A220s ayaa loo geeyay sagaal duulimaad oo ka shaqeeya waddamada Aasiya, Ameerika, Yurub iyo Afrika, taas oo cadeyneysa kala duwanaanshaha weyn ee xubinta ugu dambeysay ee Airbus.
Qandaraaskan ugu horreeyay ee FHS ee Airbus ee Waqooyiga Ameerika wuxuu xaqiijinayaa sii ballaadhinta xalka dayactirka-saacadda ee Airbus si uu ula socdo dib u bilaabista taraafikada: lixdii bilood ee la soo dhaafay, kow iyo toban qandaraas oo FHS ah ayaa lala saxeexday hawlwadeennada adduunka.